Otu esi etinye Snap & Snap-Store (Snapcraft) na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye Snap & Snap-Store (Snapcraft) na Debian 11 Bullseye
October 28, 2021 September 30, 2021 by Jọshụa James
Mgbọrọgwụ ma ọ bụ Sudo Access
Wụnye Snap (Snapd)
Otu esi eji Snap
Nhọrọ – Wụnye Snap-Store
Nchọpụta nsogbu - Akara ngosi Snap efu
Wepu Snap (Na Debian)
Na ndabara, Debian anaghị abịa na Snap ma ọ bụ Snap Store arụnyere n'ihi na nke a bụ njirimara nke Canonical wuru dị ka ụzọ dị ngwa ma dị mfe iji nweta ụdị ngwanrọ ọhụrụ kachasị ọhụrụ. Ubuntu Sistemu, yana ngwungwu Snap arụnyere site na sava etiti SNAP nke Canonical na-arụ.
Nyere na Ubuntu dabere na Debian, enwere ike itinye Snap yana, maka ọtụtụ akụkụ, na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwugwu. Enwere esemokwu ole na ole nwere ngwugwu akọwapụtara, ọkachasị mgbe Debian wepụrụ ntọhapụ ọhụrụ, ntọhapụ nke Debian kwụsiri ike dị ole na ole ma dị anya n'etiti. Okwu na Snaps VS APT ngwugwu njikwa bụ na Snaps nwere onwe ya, nke na-ebute mmụba .snap n'ihi inwe ihe niile dabere na ya. N'ụzọ dị iche, APT dị ọkụ karịa nkesa ọnyà ya n'ihi na ọ dịghị mkpa ijikọta ndabere.
Agbanyeghị, ụfọdụ uru dị n'iji ngwungwu ọnyà bụ na ha na-adịwanye ọhụrụ karịa ngwugwu APT, ọkachasị na nkesa dị ka Debian, nke kwụsiri ike nke ukwuu. Agbanyeghị, nke a na-abịa na ndọghachi azụ nke ngwugwu/software ochie. Uru ọzọ bụ na ị nwere ike ịwụnye otu ngwugwu n'akụkụ ngwugwu .deb site na APT mgbe ị na-etinye ngwugwu Snap ebe ọ bụ na ha agaghị akpata esemokwu ọ bụla ma nwee ike ịdị aka na ọnọdụ ụfọdụ.
Ịwụnye Snap na Debian 11 Bullseye bụ usoro kwụ ọtọ. Ị ga-amụta ka esi etinye Snap na Snap-Store na Debian 11 Bullseye na njedebe nke nkuzi.
OS akwadoro: Nnenna 11 Bullseye
Melite gi Debian 11 Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Site na ndabara, mgbe ị mepụtara akaụntụ gị na mmalite na Debian ma e jiri ya tụnyere nkesa ndị ọzọ, ọ naghị enweta ọkwa sudoers ozugbo. Ị ga-enwerịrị ike ịnweta ya mgbọrọgwụ paswọọdụ iji iwu su ma ọ bụ gaa na nkuzi nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Debian.
Snap dị maka itinye ya na ebe nchekwa ndabere nke Debian 11, a na-akpọ ngwugwu ahụ aha snapd.
Iji malite nrụnye Snap, mee iwu a.
Ọ bụrụ na ị na-etinye Snap na nke mbụ, a na-adụ ọdụ ka ịwụnye faịlụ ndị bụ isi ka ịzenarị okwu ndị na-emegiderịta onwe ha:
Na-esote, nyochaa na ọrụ Snapd na-arụ ọrụ site na iji systemctl iwu:
Ọ bụrụ na arụghị ọrụ a, jiri iwu a ka ịmalite Snap.
sudo systemctl start snap
Iji mee ka Snap na sistemụ buut, jiri iwu a:
sudo systemctl enable snap
Ugbu a etinyere Snap, ị nwere ike ịnwale ngwa ngwa ịwụnye ngwugwu, nke a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla; Otú ọ dị, maka nkuzi, ngwa Discord ga-abụ ihe atụ.
Maka ọdịnihu, iji melite Discord na ngwungwu ọ bụla nke Snap arụnyere, mee iwu a:
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye Discord, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Discord na-arụ ọrụ nke ọma na Snap na Snap Store; Otú ọ dị, dị ka ekwuru na mmalite, ụfọdụ ngwa nwere ike ịbụ nsogbu, dị ka ịtinyeghị akara ngosi na menu ngwa. Ọ bụrụ na nke a emee, lelee ngalaba nchọpụta nsogbu na njedebe nke nkuzi.
Mgbe ị tinyechara Snap na sistemụ Debian gị, ị nwere nhọrọ iji wụnye ụlọ ahịa Snapcraft, nke na-eji UI eserese nke nwere ike ịmasị ma dị mfe ịchọ ngwugwu. Nke a bụ nhọrọ kpamkpam, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye, gbanye iwu a:
snap-store 3.38.0-64-g23c4c77 from Canonical✓ installed
Site na nrụnye zuru oke, ị nwere ike ịme ụlọ ahịa Snap n'ụzọ dị iche iche.
Nke mbụ, mgbe ịnọ na ọdụ gị, ịnwere ike iji iwu a:
snap run snap-store
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ snap run snap-store & nye iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọdụ ụgbọ ala:
snap run snap-store &
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Ụlọ ahịa nfe. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ozugbo emepere, ị ga-akụ ibe ụlọ ahịa ọdịda Snap Store. Site ebe a, ị nwere ike ịchọ ma wụnye ngwugwu Snap nke ị họọrọ.
Ugbu a, na Debian 11, Snap, maka ọtụtụ akụkụ, na-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwugwu. Agbanyeghị, n'oge ụfọdụ, ngwa anaghị etinye akara ngosi ha na mbido ngwa sistemụ. Enwere ike idozi nke a na usoro dị n'okpuru.
Mbụ, mee iwu na-esonụ iwu ln-s:
sudo ln -s /etc/profile.d/apps-bin-path.sh /etc/X11/Xsession.d/99snap
Na-esote, jiri editọ ederede mepee faịlụ ahụ nbanye.defs:
Ozugbo n'ime faịlụ ahụ, mado koodu na-esote na njedebe nke faịlụ ahụ.
Ọzọ, chekwaa faịlụ ahụ CTRL + O wee pụọ na CTRL + X.
Iji mee ka ndozi ahụ dị ndụ, ị ga-achọ ịpụ apụ wee banye azụ azụ. Otú ọ dị, ọ ka mma ịmalitegharịa usoro ahụ.
Mgbe ịbanye na sistemụ, akara ngosi efu ga-apụta.
Iji wepu Snap kwụsịrị sistemụ Debian gị, mee iwu a:
sudo apt autoremove snapd --purge
Ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ka ịga n'ihu na iwepụ (iwepụ).
Nke a ga-ewepụ Snap yana ngwungwu agbakwunyere arụnyere yana dabere. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị rụnyere Ụlọ Ahịa Snap ma i wepụghị ya na mbụ, ngwugwu a na ndị ọzọ Snap arụnyere n'uju.
Removing snap snapcraft and revision 6751
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye na Debian 11 Bullseye Canonical's Snap system wee wụnye, melite, ma wepụ ngwugwu. N'ozuzu, mmegharị nke iji ngwugwu Snap yiri ka ọ na-ekewa ndị ọrụ n'etiti. Ọtụtụ sysadmins na ndị ọrụ ike agaghị emetụ Snaps aka; Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọrụ desktọpụ na ndị nkịtị na-enwe obi ụtọ nke ịwụnye na inwe ngwugwu emelitere ma ghara ichebara bloat na oghere. Nyere ka nnukwu draịva SSD siri bụrụ ụbọchị ndị a, ihe dị iche dị obere ma ọ bụrụ na ị nwere oke akụrụngwa dịka ihe nkesa mmepụta. Ndị ọrụ ụlọ na-ahụ na ịwụnye ngwa siri ike na Debian kwesịrị ịlele Snap iji chekwaa oge na nkụda mmụọ mgbe ha na-amụ usoro.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Mkpochi.io Mail igodo
Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Ubuntu
Otu esi etinye & Jiri PHP Composer na Debian 11 Bullseye
1 chere na "Otu esi etinye Snap & Snap-Store (Snapcraft) na Debian 11 Bullseye"
October 18, 2021 na 12: 23 pm
Ọ bụrụ na ndị mmepe Debian tinye snap na Debian. Enwere m ike ịnwale ya.